How Balcha Saafo, the Great Warrior Fell into the Trap of Haile Selassie - Oromo and East African History - Maroole Online Forum
How Balcha Saafo, the Great Warrior Fell into the Trap of Haile Selassie
Oromo and East African History
Maroole 2017-11-10 21:34:15 UTC #1
Do not underestimate the power of Tafari. He creeps like a mouse but he has jaws of a lion.
~Balcha of Sidamo’s last words before entering the monastery.
Maroole 2017-11-03 17:50:36 UTC #2
DABNI HOJJACHUUF DEEMTU AKKA SIRRATTI
HINBEEKKAMNE GOLGAA ITTI FAKKEESSUN DHIMMA BAYII.
(USE SMOKE SCREEN TO DISGUISE YOUR ACTION)
Nama mooksuun yeroo hunda tarsiimoo mishaa yaa ta’u malee akka gaariitti mooksuuf waan hojjachuuf karoorfatterraa yaada namaa dabsuuf (distract gochuuf) ammoo golgaa itti fakkeessu (screen of smoke) sibarbaachisa. Gubbaan kee homtuu akka irraa hinmul’anne yoo goote golgaa fakkeessuu cimaa waan ta’uf waan yaadde hundumaa rakkina tokko malee dhoksuun sihindhibu. Nama barbaadde sana karuma baramerratti yoo kan bobbastu ta’e amma kiyyoo kee keessan geessutti sirratti hinbeekamu.(Yaada kana kitaaba mata-dureen isaa THE 48 LAWS OF POWER jedu kan nama Robert Greene jedhamuun afaan Engiliffaan barreeffame keessaa seensa barru mata-duree olitti tuqame fuula 23irraayin fuddhee gara afaan Oromootti hiikee. Mata-dureen kuni kutaa lama yoo qabaatu kutaa tokkooffaan waan nu hinilaallef asirratti tuquun nahinbarbaachifne. Kan nu ilaalu kutaa lammaffaa akka kanaa gadiitti hiikee yaada nakaase itti dabalee diyeessee jiraa akka dubbiftan kabajaadhanan isin afeera. Hiikan saa yoo dogoggora qabaate durseetan dhiifam gaafadha, naa sirreessaa too dubbisaa.)
SEERA HOJIRRA OOLCHUU II
Bara giddu-gala 1920 keessa abbootin waraanaa Itoophiyaa dargaggeessi sanyii kabajamoo keessaa bahe H/Sillaasee ykn Ras Tafarii jedhamuun beekkamu isaan caalaa dhufuufii biyyatti tokkoomsee hoogganaa saanii ta’ee labsuuf akka qopha’a jiru hubatani. Warri waldorggommi keessa turan kuni namitti tuffatamtuu, qabbanooftuufi lallaaftuun tuni akkamitti akka waan kana toowachuf deemtu isaanii hingalle ture.Yaa ta’u malee bara 1927 keessa H/Sillaaseen abbootii waraanaa tokko tokkoon Shaggaritti ofitti waamee isa jalatti bulaniif hooggana isaa fudhacuu saani akka mirkaneessan (ibsan) taasisuu danda’ee ture.
Tokko tokko ariitidhaan yoo dhaqu kan akka Baalchaa faa ammoo harkifachaa turani. Kana keessatti namni tokkichi ifatti diddaa agarsiise Dajjaazmaach Baalchaa qofaadha. Baalchan nama waan itti amane ifatti dubbatuufi goota waraanaa beekkamaa yoo ta'u hooggana haar'a kana akka dadhabaafii kan faayidaa hinqabne jedhee ilaale. Kanaafis Shaggar irraa fagaate ture. Dhumarratti garuu H/Sillaaseen Baalchan akka dhufu ajaja cimaa itti erge. Abban waraanaa kunis ajaja kana fudhachuuf murteessee, kana gochuun garuu nama barcuma aangoo Itoophiyaa qabate of fakkeessaa jiru kanarratti balaa buusuuf kutate. Karoora kanas fiixan baasuuf loltuu isas ofis eeguuf gahaa ta'efii waraana ummataa (civil war ) adeemsisuu danda'u 10,000 hiriirsee Shagaritti qajeele. Loltuu isaa cimaa kana sulula Shaggarirraa maayila sadi fagaatu keessa qubachiisee akka mootitti H/Sillaaseen dhufee akka isa simatu eegaa ture.
H/Sillaaseen garuu Baalchan dheena kabajaa isaati qophaayeerratti akka argamu nama itti himu itti erge. Yaata'u malee Baalchan seenaa darban waan beekuuf gowwaa of dagatu hinturre. Moototiifi abbootin waraanaa Itoophiyaa afeerraa akkanaa kana akka kiyyootti akka itti gargaaramaa turan hubatee jira. Yeroo tokko achi seenee dhugaatii quufnan H/Sillaasen akka hidhu ykn akka ajjeesu nibeeka ture. Haala kana shakkuu isaa  ibsuuf loltoota isaa kan isa eeganiifi ofirree eegu danda'an 600 hidhannoo saani waliin yoo fudhatee dhaquu danda'e qofaa akka afeerricharratti argamu itti ibse.Wanni Baalchaa dinqisiise H/Sillaseen gaafii isaa kana haala gaarin simatee gootota akkasii kana keessummeessuun isaafuu kabajaa akka ta'e deebisee dhaameefi.
Yeroo gara afeerrichaatti deeman Baalchan loltoota isaa akka duganii hinmachoofneef eegumsa saanii hindaganne akeekkachisaa ture. Yeroo masaraa gahan H/Sillaaseen hedduu miidhagee argan. Baalchatti H/Sillaaseen nama biraa ta'e itti mul'ate, deggersa isaa kennuun (mirkaneessun) akka gargaaru Baalchaa kadhate. Baalchan garuu jecha isaa bareedaa kana fudhachuu nidide,yoo galgala buufata loltoota isaatti deebi'u baate loltoonni isaa ajejni magaalatti weeraruu itti kennamee jira jedhee H/Sillaasee akeekkachiise. H/Sillaasenis amantii irraa dhabuu Baalchaa kanaan akka hubame ibseefi. Yeroo dheenaa faaruu aadaa hooggantoota biyyatti faarsun yoo jalqabamu H/Sillaaseen faaruu kabajaa abbaa waranaa Sidaamoo ibsu malee nama biraa akka hinfaarsine ajaja dabarse.Kuni Baalchaatti akka waan H/sillaaseen sodaatee fii rifatee itti fakkaatee ofii saa goota hiriyaa hinqabnetti of lakaaye. Jijjiramni akka dhufaa jirtu waan itti dhagahameef guyyoota gabaabduu keessatti dhukaasa akka banu amane.
Gara galgalaa Baalchaf loltoonni isaa gammachuudhan dhukaasaa gara buufata saanitti qajeelani. Baalchan of duuba garagalee gateetti isaatirraan magalaatti hubachaa tarsiimoo saa karoorfate.Torban tokko keessatti akkamitti loltoonni isaa injifannoon magaalatti keessa akka burraaqaniifii H/Sillaasee iddoon isaa akka kennamuuf-iddoon isaas hidhaa ykn du'a akka ta'u murteesse. Yaata'u malee yeroo Baalchan buufata loltuu saatti dhiyaatu balaan guddaan wayii akka huummame arge. Iddoo dura amma ijji arguu danda'utti dunkaanni halluu adda addaa qaban dhaabbatee ture amma homtuu hinjiru, aara barbadaa keessaa aaruu qofaatu mul'ata. Kuni hojii seexanaati moo maali?
Namni balaa kana ijaan arge waan raawwatame Baalchatti hime.Yeroo dheenaa deemu loltuun deggeraa H/Sillaseetin hoogganamu hedduun akka Baalchan hinarginetti karaa biraa goruun hannaan gara buufata Baalchaa dhaqani Baalchan dhukaasa yoo dhagaye loltoota isa eegan 600n wajjin ofirra garagaluu akka danda'u waan beekaniif lola banuf hindhaqne ture. H/Sillaseen loltoota isaa warqiif qarshii shaaliidhaan baachisee itti erge. Isaanis loltoota Baalchaatti marsanii meeshaa hidhatan irraa bituutti ka'an. Kan didanis salphaatti doorsifamani. Sa'aa muraasa keessatti loltoonni Baalchaa hidhannoo harcaafatanii gara gara bittinaa'ani.
Baalchan balaa isaa xiinxaluun loltoota isa waliin turan 600n qabatee loltoota hafan gurmeessuu murteeffate gara kibbaatti qajeele, yaata'u malee loltootuma humna saa irraa hiikkateetu karaa itti cufe.Karaan biraa isa baasu magaalatti weeraruudha, garuu H/Sillaaseen humna gudaa magaalatti tikisu achiinis qubachiisee eege.Akka nama cheezii taphatuu adeemsi Baalchaa dursee waan hubatameef kiyyoo mootin itti nyaatamu (check mate) keessa galche.Umrii isaa keessatti Baalchan yeroo jalqabaatiif harka kennate.Cubbuu oftuulummaf hawwi hintaane hawwuurraa of qulqulleessuuf gadaamitti galuu filate.
Yeroo dheeraa H/Sillaaseen aangorra ture sana keessatti eenyumtuu keessa iasaa beekuu kan danda'e hinturre. Itoophiyaanonni moototin saanii yoo sodaachisoo ta'an jaalatu,yaa ta'u malee H/Sillaaseen fuulduratti eenyumayyuu caalaa nama gaarii,nama naga jaalatu of fakkeessee hunda caalaa angorra ture. Gonkumaa kan hin aarrefii tasgabbi hindhabne, namoota balleessuu barbaadu hanga balleessutti itti seequun kan kiyyeessu,naga'af gammachuun kan itti haasawufii gadi jedhee kan simatu ta'e mul'ata. Gara Baalchatti yoo deebinu H/Sillaaseen cinqama Baalchatti dhimma bahee shakkii isaa afeerran akkanaa kiyyoodha jedu-kan inni shakke ta'u baatus dhugumutti afeerrichi kiyyoo ture. H/Sillaaseen sodaa baalchaa tasggabbeessuuf Baalchan loltoota isaa afeerrichaaf akka fudhatee dhufu eeyyamuun,iddoo guddaa kennuufii, Baalchan waan hundumaa akka toowachaa jiru akka itti dhagahamu taasisuun isaa-golgaa itti fakkeessu (smoke screen) yabbuu huumee waan maayila sadi'irratti ta'a ture dhokse.
Yaadadhaa : Nama sodaa dararamu fii cinqama qabu mooksuun salphaadha.Karaa tokko amantii saani yoo horatan golgaa itti fakkeessaa (smoke screen) akka karaa biraa hin ilaalle isaan jaamsu fii akka lamuu ka'u hindandeenyetti lootanii rukutuuf isin dandeessisu horattan jechuudha. Sochiin isin gargaaru amanamaa ta'ani mul'achuu ykn namni barbaadamu suni akka isin caalu eeruu ,isaan kuni guututti meeshaa yaada nama sanaa karaa irraa dabsaniidha.
Golgaan itti fakkeessaa (smock screen) sirriin tolfamnaan meeshaa aangoo guddaati.Kanatuu H/Sillaasee qabbanaawwan suni oto rasaasa takka hindhukaasin diinota isaa maraa akka balleessu dandeessise.
“Humna Tafarii xiqqeessitanii hin ilaalinaa.
Akka hantuutaa loo'aa yaa ta'u malee
ha'oo akka leencaa qabaa.”
Jecha Baalchaa isa dumaa oso gadaamii hinseenin dubbate.
* Kitaaba olitti tuqame fuula 25-27 ilaalaa.
Dagnu hiikan isaa kanaa yoo barbaadde suuraa Baalchaa irr kaahii.